Dhaqdhaqaaq Ciidan Oo Saaka Laga Dareemayo Deegaanka Tukoraq+Wararkii U Dambeeyay | Daldoon Ugu Kaalay Wararkii Ugu Danbeeyey
Dhaqdhaqaaq Ciidan Oo Saaka Laga Dareemayo Deegaanka Tukoraq+Wararkii U Dambeeyay
Mar 12, 2018 - 3 Jawaabood
Cabsi xoogan ayaa soo food saartay dadka deegaanka tukoraq iyo degaanada dhaca laamiga gobolka sool kadib markii 24 saac ee la soo dhaafay laga dareemayay dhaqdhaqaaq ciidan oo cusub ayna wadaan ciidamada puntland oo kaashanaya kuwa deegaanka xaq u diri ah .
Dadka rayidka ah ayaa ka cabsi qaba in lagu kor dagaalamo maadama maleeshiyaadka SNM ay isticmaalayaan wadda dheer ee laamiga,waxaana xusid mudan in maleeshiyaadka SNM ay todobaadyadii u dambeeyay ay waddo raf ah ka samaysteen dhanka holhol halkaa oo ay uga gudbi doonaan dhanka degaanadooda.
Ciidamada Puntland ayaa doonaya nay dib u qabsadaan magaalada tukoraq halkaas oo maleeshiyaadka SNM-ta ay dagaal kula wareegeen kal hore wararka ayaa intaa ku daraya in maleeshiyaadka SNM dhankooda is xoojiyeen
war dadka beenta ka daaya
puntland iyadaaba lafaheeda u liidata
waana guureen buurawadal iyo bixin
bay difaac ka xidheen
Ibraahim walaal “saadamaad garan”.
In ay guureen iyo in ay joogaan ciidamada puntland.
Balan waxa inoo ah in habeenka oohin ku waalan.